AHOANA NO HANAISOTRA NY FANITARANA AO AMIN'NY GOOGLE CHROME - GOOGLE CHROME - 2019
Tena Google chrome
Atsaharo ny fanitarana ao amin'ny navigateur Google Chrome
Sarotra ny mieritreritra ny miasa miaraka amin'i Google Chrome amin'izao fotoana izao fa tsy manangana fanitarana izay mampitombo ny fatran'ny navigateur ary mitsidika ireo loharanom-baovao. Na izany aza dia mety hisy olana mitranga amin'ny solosaina. Izany dia azo esorina amin'ny fanesorana fanampim-panafana mandritra ny fotoana voafetra, na mandritra ny fotoana voafetra, izay hifanakalozantsika mandritra ity lahatsoratra ity.
Atsaharo ny fanitarana ao amin'ny Google Chrome
Amin'ity torolàlana manaraka ity, manaraka dingana isika dia mamaritra ny fizotran'ny fanitarana ny fanitarana an-tserasera ao amin'ny Google Chrome amin'ny sehatra PC iray tsy misy fanesorana azy ireo ary ny fahafaha miditra amin'ny fotoana rehetra. Mandritra izany fotoana izany, ny dikan-teny finday amin'ny tranokala web dia tsy manohana ny safidy hananganana tafika fanampiny, ka izany no tsy hitranga.
Safidy 1: Mitantana fanitarana
Azo ampiasaina avokoa ny kitapom-pitaovana an-tariby na ny safidiny. Ny fanesorana sy ny famelana ireo extension ao Chrome dia azon'ny mpampiasa tsirairay atao amin'ny pejy manokana.
Jereo koa: Aiza ireo fivoahana ao amin'ny Google Chrome
Sokafy ny navigateur Chrome Google, manitatra ny menio lehibe ary mifidiana "Fitaovana fanampiny". Tahaka izany ihany koa, avy ao amin'ny lisitra miseho, mifidiana ny fizarana "Fanitarana".
Aorian'izany dia tadiavo ny fanampiana ho kilemaina ary tsindrio eo amin'ny tsindry eo amin'ny zoro ambany ambany amin'ny sakana tsirairay eo amin'ny pejy. Misy toerana marim-pototra kokoa hita ao amin'ny pikantsary mifandray aminy.
Raha nahomby ilay fisintonana, dia hiverina ny volom-borona efa nambara taloha. Ity fomba fiasa ity dia azo raisina ho feno.
Amin'ny safidy fanampiny, afaka mampiasa ny bokotra aloha ianao. "Read More" Ao amin'ny tranokely miaraka amin'ny fanitarana ilaina sy ny pejy misy ny famaritana tsindrio ny tsindry eo amin'ny tsipika "ON".
Amin'ity tranga ity, aorian'ny fanesorana, tokony hosoloina ny soratra eo amin'ny tsipika "OFF".
Ankoatra ny fanitarana mahazatra dia misy ihany koa ireo izay mety ho kilemaina tsy ho an'ny tranonkala rehetra ihany, fa koa ho an'ny olona misokatra eo aloha. AdGuard sy AdBlock no anisan'ireo plug-ins. Ho ohatra amin'ny fizotry ny fizarana faharoa dia nofaritana tamin'ny an-tsipiriany tamin'ny antsipiriany ny lahatsoratra, izay tokony hodinihana araka izay ilaina.
Vakio bebe kokoa: Ahoana no hanaisotra ny AdBlock amin'ny Google Chrome
Noho ny fanampian'ny iray amin'ireo torolalana azonay, dia afaka manampy anao koa ny fanampiana amin'ny olon-kafa.
Vakio bebe kokoa: Ahoana no ahafahana manitatra ny Google Chrome
Safidy 2: Fampivoarana Advanced
Ankoatra ny fanitarana izay napetraka ary, raha ilaina, fanitsiana manova, dia misy ny fanovana izay natao amin'ny fizarana tsirairay. Izy ireo dia amin'ny fomba maro mitovy amin'ny plug-ins, ary noho izany dia afaka ny ho kilemaina koa izy ireo. Saingy tadidio fa hisy fiantraikany eo amin'ny fampisehoana ny tranonkala Internet.
Jereo koa: ny fikandrana miafina ao amin'ny Google Chrome
Ny sehatra misy fikandrana fanampiny dia miafina amin'ny mpampiasa tsotra. Mba hanokafana azy, dia mila kopia ianao ary mametaka ity rohy manaraka ity ao amin'ny adiresy barre, izay manamarina ny tetezamita:
chrome: //flags /
Ao amin'ny pejy misokatra, tadiavo ny mari-pamantarana mahaliana ary tsindrio ny bokotra eo akaikiny. "Afaka". Avy amin'ny lisitra miseho, mifidiana "Disabled"hanaisotra ilay endri-javatra.
Amin'ny toe-javatra sasany dia tsy afaka manova afa-tsy ny fombafomba fanao ianao raha tsy misy ny fisakanana.
Tadidio fa ny fanakatonana fizarana sasantsasany dia mety mahatonga ny navigateur tsy mety. Izy ireo dia tafiditra amin'ny alalana ary tokony tokony hijanona ho azy.
Ny torolalana nofaritana dia mitaky asa faran'izay kely azo haverina ary noho izany dia manantena izahay fa nahavita ny vokatra tadiavina. Raha ilaina dia azonao atao ny mametraka ny fanontanianao amin'ireo fanehoan-kevitra.
https://termotools.com mg.termotools.com © Google chrome 2019